RASMI: Kooxda Paris Saint-Germain oo ku dhawaaqday saxiixa Ander Herrera… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa?) + SAWIRRO – Gool FM
RASMI: Kooxda Paris Saint-Germain oo ku dhawaaqday saxiixa Ander Herrera… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa?) + SAWIRRO
(Paris) 04 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa xaqiijisay inay la saxiixatay laacibkii khadka dhexe ee Manchester United ee Ander Herrera.
Xiddiga xulka qaranka Spain ayaana PSG qalinka ugu duugay heshiis shan sanadood ah oo uu ku sii joogayo caasimadda Waddanka Faransiiska.
Herrera, kaasoo ka tagay Old Trafford kaddib markii uu ku guuldarreystay inuu heshiis cusub la galo kooxda ka dheesha horyaalka Premier League ayaa la filayey muddooyinkii ugu dambeeyey inuu ku biirayo kooxda xafidanaysa horyaalka Faransiiska.
Haatan heshiiska Herrera ayaa la xaqiijiyey, iyadoo kooxda Parisians ay website-keeda ku shaacisay inay la soo wareegtay laacibkan khadka dhexe ee Herrera.
Bayaan ka soo baxay kooxda PSG ayaa u dhiganaa: “Paris Saint-Germain waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inuu ku soo biiray Ander Herrera Agüera.”
“Laacibkan khadka dhexe ee reer Spain ayaa yimid Paris kaddib markii uu dhammaaday heshiiskiisa Manchester United, waxaana uu saxiixay qandaraas shan sanadood ah oo kooxda caasimadda ku sii hayn doona illaa 30 bisha June sanadka 2024-ka.”
Herrera ayaa lagu taagay lambarka 21-aad ee kooxda Paris Saint-Germain, kaasoo ah lambarkii uu u xiran jiray naadiga Manchester United.
29-sano jirkaan Herrera ayaa Man United kaga soo biiray kooxda Athletic Bilbao sanadkii 2014-kii, waxaana uu ku guuleystay Europa League, FA Cup iyo Carabao Cup intii lagu guda jiray wakhtigiisii Magaalada Manchester, sidoo kalena waxaa loo magacaabay ciyaaryahanka ugu fiican sanadka kooxda xilli ciyaareedkii 2016-17.
RASMI: Arsenal oo iibisay mid ka mid ah xiddigaheeda
RASMI: Arjen Robben oo ku dhwaaqay inuu isaga fariistay gabi ahaanba ciyaarista kubadda cagta